Nke a bụ Meizu 17, na-esote elu-njedebe nke ika | Gam akporosis
Thelọ ọrụ ama ama anaghị akwụsị, n’etiti ọrịa a nke ọrịa COVID-19 kpatara. Meizu bụ otu n'ime ndị nrụpụta na-aga n'ihu na-arụ ọrụ iji malite smartphones na-abịa, na ekwentị nke yiri ka ọ kacha nso bụ Meizu 17, ọkọlọtọ nke nwere ụbọchị ntọhapụ na nke a n'ezie foto a na-leaked egosi na ya mechara imewe.
Anyị anaghị atụ anya obere ihe site na ọnụ ọgụgụ arụmọrụ a dị elu. Firmlọ ọrụ China na-ezute mgbe niile atụmanya nke ahịa, nke àgwà ọma na uru dị mma maka ego nke ụdị nke ọ bụla na-akwado ya.
Nke a bụ ihe Meizu 17 dị
Meizu 17 leaked
Naanị foto nke ngwaọrụ ahụ na-ekpughere oghere azụ ya apụtala, yabụ anyị amaghị ihe ọdịdị ngalaba ahụ dị. O sina dị, Ọ bụ ezigbo mmalite iji mara ihe ọdịdị dị n'azụ anyị ga-enweta site na mkpanaka a na-echere ogologo oge.
Dị ka ị pụrụ ịhụ na foto a, na Meizu 17 na-etu ọnụ maka ogwe azụ dị ọcha nke na-egosighi na ọ nwere ederede ọ bụla. Ngwunye igwefoto n'azụ nwere igbe na-akpali akpali ma jikọta ya na igbe elongated nke nwere nkuku gbara gburugburu. N'ụzọ na-akpali mmasị, anyị anaghị ahụ ọkụ ọkụ, mana n'ezie agwakọtara ya na modul ma ọ dị.
Enweghi akwukwo nkpisi aka obula nke di na mkpuchi, nke na - eme ka anyị chee na ekwentị ahụ ga - ahọrọ ihuenyo teknụzụ AMOLED nke na - agbakwunye ihe mmetụta dị n'okpuru onwe ya, ọ bụ ezie na enwerekwa ohere ọ dị n'akụkụ, nke na - apụtaghị na ngwaọrụ ahụ ga-adabere n'akụkụ ya. nke ihuenyo site na teknụzụ ọzọ.
Gara aga akụkọ hụ na ogwe nke ekwentị a dị sentimita 6.4 ma ọ bụ 6.5 nakwa na Snapdragon 865 bụ nke na-enye ya ike. A kpọkwara 5GB LPDDR8 RAM na 128GB UFS 3.1 ohere nchekwa dị n’ime. Ọ ga-abịarukwa na batrị ikike nke 4,500 mAh na nkwado maka teknụzụ wired na 30 watt ngwa ngwa na 30 watts nwekwara maka ikuku ikuku. A ga-akwado njirimara na nkọwa ndị ọzọ na / ma ọ bụ mara na Eprel.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nke a bụ Meizu 17, na-esote elu-akara nke ika
A ga-akwụsị Redmi K30 4G ma dochie anya nsụgharị 5G zuru ụwa ọnụ
Disney Sorcerer's Arena na-ewetara gị anwansi niile nke ndị odide ya na agha ndị dabeere na ya